Vilnius Airport na-abanye na Airport Coordination UK iji jikwaa oghere ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Vilnius Airport na-abanye na Airport Coordination UK iji jikwaa oghere ya
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ Lithuania • News • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Vilnius_Ọdụ ụgbọ elu_2
Vilnius Airport, Lithuania, na nkwekọrịta na Airport Coordination Ltd, UK maka ịhazi nhazi oge na-esote asọmpi asọmpi. Nkwekorita a bidoro maka ụgbọ elu site na ngwụcha Machị, 2019, dabara na usoro iheomume IATA.
Vilnius Airport, Lithuania, na nkwekọrịta na Airport Coordination Ltd, UK maka ịhazi nhazi oge na-esote asọmpi asọmpi. Nkwekorita a bidoro maka ụgbọ elu site na ngwụcha ọnwa Machị 2019, dabara na oge ọkọchị IATA.
Ọdụ ụgbọ elu Vilnius kpaliri ịkwaga ebe a na-ekenye oghere ka ọ na-aga ngwa ngwa ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ elu IATA Level 2. Ọ na-elekọta ndị njem nde 3.8 n'afọ gara aga, nde mmadụ 3.3 n'ime ha na-aga n'okporo ụzọ ndị a kara aka.
Ọ hụlarị mmụba 17% na ọkara nke mbụ nke 2018, ma e jiri ya tụnyere oge kwekọrọ na 2017 ma na-aga iburu nde mmadụ 4.7 site na njedebe nke afọ, ya na 24% na 2018.
N’ịnabata mmekọrịta ọhụrụ na ACL, Dainius Ciuplys, Onye isi Nchịkwa nke Vilnius Airport kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ ịmalite iso onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ ike ma nwee ahụmahụ, Airport Coordination Limited. Ha ga-enyere anyị aka na ebumnuche anyị bụ isi, bụ ijikwa elu elu ụgbọ elu ma bulie akụrụngwa nke ọdụ ụgbọ elu ahụ, na-enyere anyị aka ịnye ndị njem anyị ọrụ kacha mma. ACL ga - enyere anyị aka ka gị na ndị ụgbọ elu nwee mkparịta ụka maka ịpụ ma ọ bụ nweta iji nweta nsonaazụ kacha mma. ”
“Vilnius Airport na-ewebata oghere n’otu mgbe ụgbọ elu ndị dị ugbu a na-agbakwunye ugboro ole. Baltic bụ mpaghara siri ike maka ikuku ụgbọ elu, na-enwe mmasị maka njem - maka njem na azụmahịa. Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu a siri ike, na-eche echiche n'ihu na Lithuania, "Onye isi nchịkwa ACL Mike Robinson kwuru.
N'oge ọkọchị Vilnius Airport a na-akwado ụzọ 60 akwadoro, ọtụtụ n'ime ha kwa afọ, yana mmụba ndị njem na-eduga ndị ụgbọ ala dị ala Ryanair, Wizz Air na ụgbọ elu ụgbọ elu LOT, airBaltic, Finnair na Turkish Airlines, tinyere ndị ọzọ. Oge oyi a na-anabata ọrụ ndị ọzọ ahaziri maka Amman, Marrakech, na Treviso. Maygbọ elu SCAT ụgbọ elu May Kazakhstan a webatara ụgbọ elu na Astana.